विवादका बिच टिबिएनको अध्यक्षबाट आरके मानन्धरको राजीनामा – Media Kurakani
May 29th, 2015 Rabi Raj Baral Media News
केही दिनअघि एउटा संस्थाले निकालेको विज्ञप्तिको आधारमा विभिन्न मिडियामा समाचार आयो- एभिन्युज टेलिभिजनको लाइसेन्स सरकारले रद्द गर्‍यो। यसरी विज्ञप्ति निकाल्ने संस्था हो- टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स नेपाल अर्थात छोटकरीमा टिबिएन।
यसका बारेमा गुगल नगर्नुस् किनभने यसको वेबसाइट छैन र यसका बारेमा इन्टरनेटमा खासै जानकारी पाइँदैन।
टिबिएनले जेठ १२ गते निकालेको विज्ञप्तिका अनुसार टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स नेपाल ‘निजी क्षेत्रका टेलिभिजनहरुको प्रतिनिधिमूलक साझा संस्था’ हो। यसको कार्यालय काठमाडौंको तीनकुने सुविधानगरस्थित कान्तिपुर कम्प्लेक्समा रहेको यसको विज्ञप्तिबाट प्रष्ट हुन्छ।
एभिन्युज टेलिभिजनको लाइसेन्स रद्द भएपछि उठेका बहस यसअघिको ब्लगमा समेटिएको छ। त्यसैले यहाँ त्यसबारे चर्चा हुनेछैन।
अँ, हामी टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स नेपालको कुरा गर्दै थियौँ। आजको ब्लग यही संस्थाका अध्यक्षले दिएको राजीनामाको आसपासमा केन्द्रित छ जस्को कुनै मिडियामा समाचार समेत आएन।
एभिन्युज टेलिभजनको लाइसेन्स रद्द भएकोमा विरोध जनाउँदै निकालिएको विज्ञप्तिमा टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स नेपालका उपाध्यक्ष गणेशकुमार अग्रवालको हस्ताक्षर थियो। हेर्नुस् विज्ञप्तिः
स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्यो- विज्ञप्ति अध्यक्षले ननिकाली किन उपाध्यक्षले निकाले? कारण थियो- टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स नेपालका अध्यक्ष आरके मानन्धरले राजीनामा दिइसकेका थिए।
टिबिएनको एउटा बैठकमा आफ्नो नेतृत्वबारे प्रश्न उठेपछि आफूले राजीनामा दिएको मानन्धरले मिडिया कुराकानीलाई बताए।
‘अस्ति सानो मिटिङ हुँदाखेरि मेरो लिडरसिप ठिक भएन भन्ने कुरा उठ्यो। ल त्यसो भए राजीनामा दिन्छु भनेर राजीनामा दिएको थिएँ’, मानन्धरले भने, ‘अनि यो सबै त्यही बेला भयो।‘
मानन्धरले एभिन्युजको लाइसेन्स रद्द भएपछि विज्ञप्ति निकाल्ने कि ननिकाल्ने भन्ने विवादका बिच राजीनामा दिएको श्रोतले दाबी गरे पनि मानन्धरले भने यसबारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। मानन्धर इमेज च्यानलका अध्यक्ष हुन्।
‘एभिन्युज टेलिभिजनको लाइसेन्स नवीकरण विवादमा टिबिएनको भूमिका के हुने भन्ने भन्नेमा मत बाझिएपछि तपाईँको राजीनामा आएको हो?’ भन्ने मिडिया कुराकानीको प्रश्नमा उनले भने- ‘हैन हैन। त्यसो नभनौँ।‘
आफूले राजीनामा दिएको मिति पनि मानन्धरले खुलाउन चाहेनन्।
आफ्नो नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइएपछि मानन्धरले राजीनामा दिए। तर यसबारे न टिबिएनको विज्ञप्ति आयो न त कुनै मिडियामा समाचार नै। जबकि एभिन्युज टेलिभिजनको लाइसेन्स रद्द भएको बारे विज्ञप्ति पनि आयो र प्रमुखताका साथ समाचार पनि।
मानन्धरको राजीनामा पछि नयाँ अध्यक्ष छनोट लगायतका विषयमा निर्णय गर्न आउँदो जेठ १७ गते आइतबार टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स नेपालको वार्षिक साधारण सभा हुँदैछ। तर टिबिएनले न मानन्धरको राजीनामा बारे केही बोलेको छ न त वार्षिक साधारणसभाबारे नै।
Tags Avenues Television RK Manandhar Television Broadcasters Nepal
प्रधान सम्पादक बिदा भएको पाठकलाई पत्तो नदिने? »
« नयाँ पत्रिकामा ‘मिस्टर सोलमारी’ को कथा